सामान्य समस्या नठानौँ निराशापनलाई - kageshworikhabar.com
एजेन्सी। दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्याले मानिसमा निराशा आउनु सामान्य हो । तर, यही तनाव व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कहिलेकाहीँ गम्भीर मानसिक समस्यासमेत आउन सक्छ । यसकारण निराशापनलाई सामान्य मानिए पनि यसले निम्त्याउने जोखिमबारे भने सधैँ सचेत हुन आवश्यक छ ।
Previous articleसरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले वार्ताका लागि समिति गठन गर्नु सकारात्मक : कांग्रेस
Next articleआज मिति वि सं २०७७ साल फागुन १९ गते बुधबार । कस्तो छ तपाईंको राशिफल ?
अबिबाहित र बिबाहित नारीले सोमबार यी पाँच काम गर्नुहोस्, हुनेछ मनोकांक्षा पुरा
भोलि सोमबार के कस्ता कामकाजहरु गर्नु शुभ र अशुभ हुन्छ ? ज्योतिष शास्त्रले यसो भन्छ –